"25/03/2020 Numero 14 per u - Page 97 of 98 - TheMummichogBlog - Malta In Italiano
ukuze uthole olunye ulwazi
ukuvakashelwa izibuyekezo www.covid19.gov.mt
I-Malta Employers ‘Association, wawuthi ngeqoqo lezinyathelo zezimali eyethulwe uhulumeni
omunye usizo lwezimali omuhle futhi umphumela kokubonisana ngokuhlanganyela. I-Chamber of Commerce Okwamanje
kushiwo ukuthi uyaneliswa izinyathelo ukusiza amabhizinisi kakhulu ihlaselwe Covid-19, lokhu ngesikhathi ekudumiseni umoya
ka dialgoue ngawo uhulumeni wabe kule ndaba. I-Malta Chamber of SME babemi kwelokuthi laba
izinyathelo uyonika wempilo amabhizinisi isidingo ukuze bakwazi ukuvikela imisebenzi. I saseGozo Business Chamber
kanye saseGozo Tourism Association wawuthi zokuvulwa wezimali sinike ukubaluleka yezimo ezikhethekile
ezithinta Gozitan amabhizinisi. I-Malta Amahhotela kanye ithilomu Association adunyiswe ukuzinikezela Undunankulu sika
ukubona ukuthi imboni yezokuvakasha osesimweni izithathe ukuze ixazulule leyo nezinselele ezibangelwa Covid-19. I-General Abasebenzi
Union Okwamanje wawuthi izinyathelo ukuqinisekisa yibhange amaholo kulabo abasebenza kakhulu
A OMUHLE Indlela Abasabela Ngayo
Ngeqoqo lezinyathelo YEZIMALI
IQHAZA amabhange ‘
I Bank of Valletta yamemezela asekelayo izinyathelo amaklayenti ayo abathintwa isimo somnotho
okwalethwa Covid-19. BOV usethule umisa ka engengaphansi kwengu-3 izinyanga dolobha kanye
isithakazelo lapho kuzosetshenziswa kokubili ekhaya ukubolekisa kanye loans siqu. Umkhawulo overdraft namakhadi wesikweletu
ngaphandle amacala esengeziwe aye athuthukiswa. Amashaji ku ukuhlela esisha izikweletu zezindlu kanye loans siqu babe
zakhipha, njengoba babe amashaji ku ukwelulwa ukuhoxa futhi asebenzise wesikweletu izindawo.
amacala amasha 19 Covid-19 kubo kwaqinisekiswa wokugcina angu-24 amahora. 8 amacala ahlobene phesheya,
4 abase contact nabantu igciwane yena owayesevele elibonakala
iziphathimandla zezempilo, kuyilapho 7 zazinayo ngokusebenzisa ukudluliswa wendawo, umthombo igciwane okwamanje
ukubuzisisa. Phakathi kwalezi zimo ezintsha kukhona umuntu osekhulile ka engu-81 ngubani kuze kube ayibukeki
babe ukuxakeka. Omunye umuntu osekhulile zeminyaka 61 namanje ngesikhathi ITU kodwa ongekho esimweni esibucayi.
Inani lwabantu kuze kube benegciwane igciwane manje 129.
Isibalo swab ukuhlolwa baye yashesha ukuze kutholakale labo banegciwane bese sikhipha inyumbazane
kubo ngokushesha ukuze kuncishiswe ukusakazeka kwalo. Njengoba kusukela izolo, elabhorethri zokugula at Mater
Dei Hospital waqala ukuphuza swabs at ezahlukene isikhathi Slots amane emini esikhundleni amathathu, njengoba ngamunye
umkhuba odlule. Eqinisweni, kule minyaka 24 amahora, 488 swabs athathwa. izinsalela Malta phakathi kwamazwe
okuyinto ethatha lo swabs kakhulu, futhi kuze kube manje 3.819 Benziwe: yalezi, 2.605 ezathathwa abantu
izimpawu tfula 1.218 ezathathwa abantu, bona bangeniswa esibhedlela nge ukuphefumula
nobunzima. Inani lamacala emihle novivinyo olunjalo zincike ngamunye kithi. Sidinga uku
ukusebenza ndawonye ukuze hhayi kwenezele ukusabalala coronavirus.
Swabs KANYE UVIVINYO
Ukudla izikhungo ukuphuza baye baqhubeka ogcina imithetho ephoqelelwe ukuba bahlale
ivaliwe ukuze ukusabalala Covid-19 ukuba encishisiwe. Kule minyaka engu-24 amahora, 800 ukuhlolwa bathwalwa
phandle e Malta nomunye 150 e saseGozo. Akekho wabanjwa breaking lezi ziqondiso. Izinsalela isikhalazo
ukuthi wokubambisana, kokubili kusuka amaklayenti kusukela umphakathi hhayi congegrate phambi Take-away
izikhungo, kodwa bazihlukanise. Ungabika ukuhlukumeza ku 21692447.
UKUHLOLA KU LABO NGAPHANSI
Amaphoyisa, kanye Impilo Iziphathimandla futhi ophuma eMnyangweni Civil Protection,
olwenziwa 329 wukuhlola Malta futhi saseGozo. Phakathi kuhlolwa, omunye umuntu wabanjwa
ukwephula umthetho wahlawuliswa. Njengoba banda, izinsalela isikhalazo ukuthi wonke umuntu ofanele futhi
ukubambisana nezinye iziqondiso ukuthi ikhishwe abasemagunyeni.
25981000 – Kulabo unemibuzo mayelana wemboni kwezemfundo kanye
21692447- Ukuze abanikazi bamahhotela kanye nezivakashi unemibuzo mayelana
25903030 – Ukuze abantu abadala ababeshade ukwesekwa abadinga imithi, ngomumo eyenziwe
ukudla noma imikhiqizo ukudla (izithelo nemifino).
25469111 – Kulabo asebenze kulemboni.
21411 411 – Ngoba abaseMakedoniya ngokuhlukaniswa saziso abadinga izinhlinzeko zoMthetho wamaZinga
144 – Ukuze kulabo abadinga ulwazi mayelana izinyathelo zezimali
kuphethwe Malta Enterprise.
153 – Ukuze kulabo abadinga ulwazi mayelana izinyathelo zezimali
iqondiswa nguMnyango Social Security.
2204 2200 – Ukuze izakhamuzi Maltese ngubani babanjwa kwelinye ephezulu
amazwe futhi isifiso ukubuya Malta
111 – Kulabo izimpawu of COVID-19 noma abafisa ukuthola ukwaziswa okwengeziwe